Banxusa usizo abadilikelwa indlu eCaluza | Eyethu News
Banxusa usizo abadilikelwa indlu eCaluza
“Uthi wezwa ngomsindo omkhulu ebusuku kanti indlu iyadilika.”
UNkss Sphindile Ngcamu e khombisa ngendlu ahlala kuyona edilikile nathi akanayo imali yokuyilungisa.
UBHEKENE nosizi umndeni wakwaNgcamu odilikelwe yindlu ngoMasingana, namanje ongakalutholi usizo njengoba uhlala ekamereni elingadilikanga.
UNksz Sphindile Ngcamu (22), ohlala nengane enonyaka owodwa, eCaluza uthi uswele izinto zokulungisa indlu ayishiyelwa ngabazali abangasekho emhlabeni njengoba engasebenzi bephila ngemali yesibonelelo sikahulumeni. Uma echaza ngesigameko esiholele ekudilikeni kwendlu uthe kulezimvula ezibekhona ngoMasingana kwaqala kwadilika uhlangothi olulodwa.
“Kwathi phakathi nobusuku silele sezwa ngomsindo wento edilikayo ngangaphuma ngicele usizo ngoba kwakusamnyama. Ngesikhathi sengivuka ekuseni ngafica isigubhu sikagesi siphahlake phansi izimpahla zinakele ngasizwa umfana wakamakhelwane wangixhumela ugesi wahamba esigxobeni sakwazi ukukhanyisa kanye nokupheka,” kuchaza uNksz Ngcamu.
Uthe waya kobikela ikhansela lakulendawo uNelisiwe Zanele (Tu) Ndlovu elamutshela ukuthi lizomulethela izintingo aqashe abafana abazomulungisela ngoba uhulumeni akabakhipheli imali. Uqhube wathi usesaba nokuligqugquzela ikhansela ngoba nomakhalekhukhwini walo awusabanjwa.
“Sengike ngazama ukufaka isicelo soxhaso kwiMeya uThemba Njilo onogada engabafica bangitshela ukuthi ngibale incwadi siyifake ebhokisini kuze kube yimanje asikayitholi impendulo. Ngiyacela kunoma wubani ongase asisize asilungisele indlu sengisabela impilo yomtanami kanye neyami ingakho sengize nganxusa omngani wami wakamakhelwane ukuthi azosilalisa ngoba ngiyasaba,” kubeka uNksz Ngcamu ehlengezela izinyembezi.
Ikhansela uNelisiwe Zanele (Tu) Ndlovu lithe lenkinga ekhungethe lomndeni liyayazi beselibikeliwe ngayo. “Inkinga esibhekene nayo ku-ward 20 ngeyezindlu ezakhiwe ngezitini zodaka kodwa umasipala uphezu kwezinhlelo zokwakhela umphakathi izindlu zemixhaso(RDP). Sinekomidi lesigceme sihlele ukuthi sithenge izingodo ukuze kulungiswe lendlu evele ekhona,”kubeka ukhansela Ndlovu. Uphethe ngokuthi loludaba baphezu kwalo.